Announcing Lucky Draw Winners of Limited Edition T-Shirt & Autograph Card – Amazing Yangon
Home /Featured/Announcing Lucky Draw Winners of Limited Edition T-Shirt & Autograph Card
The One Championship ရဲ့ Limited Edition T-Shirt & Autograph Card ကံထူးရှင်တွေ ထွက်ပေါ်လာပါပြီ…
🎉🎉🎉ခုလို ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်း amazingyangon မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ လက်ဆောင်တွေ မရခဲ့သူတွေလည်း ထပ်ပြီးလာမယ့် Program တွေမှာ ပြန်လည် ပါဝင်ကြပါဦး။ ရင်ခုန်စိတ်ဝင်စားဖွယ် အစီအစဉ်တွေ များစွာ ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်…
🎁🎁🎁ကဲ လက်ဆောင်ရရှမယ့် သူတွေကတော့…
1.Hsu Wadi Theint (T-Shirt)
3. ကောင်းကောင်း (T-Shirt)
4. တောသူမလေး (T-Shirt)
5. U Khat Lay (T-Shirt)
6. La Min (Autograph Card)
7. Tin Win (T-Shirt)
8. Myo Gyi (T-Shirt)
9. Min Min (Autograph Card)
10. ဂျလေဘီ (T-Shirt)
11. Ko Myint Oo (Autograph Card)
12. Thu Lay (Autograph Card)
13. Thal Thal Tone (T-Shirt)
14. Kyaw Kyaw (T-Shirt)
15. Ar Kar (Autograph Card)
16. လေပြေကိုကို (T-Shirt)
17. Din Gyi ( T-Shirt)
18. ၀င်းနန္ဒ (Autograph Card)
19.Pas Worh (Autograph Card)
20. Ko Moe (Autograph Card)
21. Soemin Thu (Autograph Card)
22. Kevin Naw (Autograph Card)
23. Kyaw Swar Aung (Autograph Card)
24. Ko Kyaw (Autograph Card)
25. ရဲထက်စိုး ရဲထက်စိုး (T-Shirt)
26. Min Min (Autograph Card)
27. Aung Than (Autograph Card)
28. Maung Myat New (T-Shirt)
29. Ko Oo (Autograph Card)
30.ပေတီး ပေစုတ် (T-Shirt)
🎀🎀🎀ထုတ်ယူရမယ့်နေရာတွေကို မကြာခင်မှာ ထပ်မံ ကြောငြာပေးပါ့မယ်…
💁‍♂💁‍♂💁‍♂လက်ဆောင်ရရှိသူတွေအနေနဲ့ နာမည် အရင်းနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များကို messenger box မှာ လာရောက် ပေးပို့ပေးထားပါ။
🎸🎸🎸ရန်ကုန်ရဲ့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုမိုသိဖို့ amazingyangon Page ကို Like & Share လုပ်ထားလိုက်ပါ။